मोरङका उनन्चालीस सहकारी कारबाहीको प्रक्रियामा
मोरङ , २१ फागुन । सहकारी डिभिजन कार्यालय मोरङले जिल्लामा निष्क्रिय रहेका ३९ सहकारीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । साधारणसभा र लेखापरीक्षण नगर्ने सहकारी संस्थाविरुद्ध कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको डिभिजन सहकारी कार्यालयका प्रमुख...
काठमाडौँ–बनारस बस सेवा शुभारम्भ, पर्यटक लाभान्वित
काठमाडौँ, २१ फागुन । धार्मिक र सांस्कृतिक महत्व रहेको काठमाडौँ र वनारसबीचको सिधा बस सेवाको विधिवत् शुभारम्भ गरिएको छ । बस सेवाको आज शुभारम्भ गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले आदिकालदेखि सम्बन्ध...
सिन्धुपाल्चोकको तीन अर्ब एघार करोड बजेट पारित
चौतारा, २१ फागुन । जिल्ला विकास समिति सिन्धुपाल्चोकको आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को लागि रु तीन अर्ब ११ करोड ६६ लाख १० हजारको अनुमानित बजेट पारित भएको छ । जिविसको २२औँ जिल्ला परिषद््मा जिविस अध्यक्ष...
एलआइसीले दोब्बर लाभांश दिने, सेयरधनी लाभाम्वित
काठमाडौँ, २० फागुन । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एलआइसी) नेपालको १३औँ वार्षिक साधारणसभाले कम्पनीको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई ३० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ १.५८ नगद लाभांश दिने निर्णय पारित गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष...
यी हुन् सहयोगी मनका खानी, सडक बनाउन एक्लैले दिए तीन लाख
खोटाङ, २० फागुन । जिल्लाको पर्यटकीयस्थल हलेसी र दुर्छिमको चुमाखु भञ्ज्याङ जोड्ने सडक निर्माणका लागि एक दाताबाट रु तीन लाख चन्दा प्राप्त भएको छ । दुर्छिमबाट पर्यटकीय तथा धार्मिकस्थल हलेसी जोड्ने सडक निर्माणका लागि...
तामाकोसी आयोजनामा सेयर आवेदनको समय थपिने
काठमाडौँ, २० फागुन । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा सेयर आवेदन गर्ने समयसीमा थप गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ । सेयर आवेदनको समय यही फागुन २५ गतेसम्म रहेको र त्ससबीचमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले...
पेट्रोलियम पदार्थमा यसरी हुन्छ पानीको मिसावट, प्रारम्भिक छानबिन सुरु
काठमाडौँ, २० फागुन । नेपाल आयल निगमले वितरण गरेको पेट्रोलियम पदार्थमा आवश्यक मात्रामा प्रज्वलनशील पदार्थ नभएको पाइएपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले छानबिन सुरु गरेको छ । विभागले निगमलाई पत्र पठाएर सात दिनभित्र सत्यतथ्य...
इटहरीमा करोडौंको लगानीमा सुविधायुक्त होटल स्थापना
इटहरी, १९ फागुन । पूर्वको सुन्दर नगरी इटहरीमा पर्यटन विकासका लागि भन्दै तीनतारे होटल सञ्चालनमा आएको छ । ११ फागुन बाट सेवा सुरु गरेको तीनतारे पाथीभरा होटल सञ्चालनमा आएको हो । सुरुवाती सेवामा होटलले...
तामाकोशीका लगानीकर्ता सरकारी कर्मचारी, ८० हजारले आवेदन दिए
काठमाडौँ, १८ फागुन । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नका लागि कर्मचारीको उत्साह उल्लेख्य रहेको पाइएको छ । सधैँ टिप्पणी उठाउने र सदर गर्ने कर्मचारी पनि सेयर आवेदनका लागि नागरिक लगानी कोष र वाणिज्य...
विकासका लागि म्याग्दीमा करिब साढे दुई अर्बको बजेट प्रस्ताव
म्याग्दी, १९ फागुन । जिल्लामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ का लागि रु दुई अर्ब २५ करोड बराबरको बजेट तथा कार्यक्रम सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ । जिविसले बेनीमा आयोजना गरेको २३ औँ जिल्ला परिषद्मा स्थानीय...
टेलिकमको विशेष छुट सहितको सेवा सार्वजनिक
काठमाडौँ, १८ फागुन । नेपाल टेलिकमले अघिल्लो वर्ष प्रयोगमा ल्याएको एप्समा सेवा विस्तार गरेको छ । एन्ड्रोइड स्मार्ट मोबाइल प्रयोगकर्ता ग्रहकलाई लक्षित गरी प्रयोगमा ल्याएको एप्समा हाल एडिएसएलका साथै प्रिपेड, पोस्टपेड र सिडिएमए मोबाइलको...
सरकारी ग्यास चाहियो ? १५ दिनसम्म खाना नखानुहोस् !
काठमाडौं, १८ फागुन । नेपाल सरकार अन्तर्गत नेपाल आयल निगमको थोक विक्रेता नेशनल ट्रेडिङले सरकारी ग्यास पाउन १५ दिन खाना नखान भनेको छ । ट्रेडिङले प्रत्येक व्यक्तिलाई १५ दिनपछि ग्यास उपलब्ध गराएको खुलासा भएको...